Wasakhda lagu beero - Xarunta EcoTechnology
Cunto lumis ayaa ka kooban in kabadan 20% qulqulka qashinka adag ee degmada gudaha Mareykanka. Inta badan cunnadan la khasaariyey waxay ku dhammaataa qashin-qubka, iyadoo ku saabsan oo keliya 4% qashinkaas cuntada ah tagayo compost. Tani waa arrin sababta oo ah sida cuntada ugu daaqdo meelaha qashin-qubka ah waxay maraysaa habka anaerobic, inta lagu guda jiro taas oo soo saarta methane, gaas awood badan leh.
Ka weecinta cuntada luntay iyo waxyaalaha kale ee dabiiciga ah, sida caleemaha iyo goosashada cawska, qashin qubka ma ahan oo keliya yaraynta qiiqa gaaska lagu sii daayo, laakiin sidoo kale waxay keydineysaa ilaha. Ka dib markii Kala sarraynta Soo-kabashada Cuntada ee EPA, Cuntada waa in marka hore laga yareeyaa isha inta ugu macquulsan, ka dibna loo leexiyaa si loo quudiyo dadka gaajaysan marka labaad, ka dib u tag in la quudiyo xayawaanka saddexaad, ka dibna loo isticmaalo dheefshiidka anaerobic iyo hababka kale ee warshadaha afraad, ka dibna la isku daro shanaad. Meesha ugu dambeysa uguna dambeysa ee qashinkaas cunno waa qashin-qubka.
Aynu si dhow u eegno heerarka afraad iyo shanaad ee heerarkan waxoogaa aad u dhow. Dheefshiidka Anaerobic wuxuu jajabiyaa maadada dabiiciga iyadoo la adeegsanayo microbes ku jira deegaanka anaerobic (oksijiin la'aan). Waxa jira laba wax soo saar oo hawshan ah: methane iyo wax ka beddelka ciidda. Matoonka ayaa laqabtaa waxaana loo isticmaalaa tamar, halka wax ka bedelka carrada loo isticmaali karo beeraha bacrimin ahaan.
Heerka shanaad ee kala sarraynta waa isku-darka. Isku-darka waa wax qof kastaa sameyn karo waana mid si gaar ah waxtar u leh maxaa yeelay waxay u rogaysaa arrintaan dabiiciga ah wax-ka-beddelka ciidda (asal ahaan bacriminta). Badeecadan la dhammeeyay, oo sidoo kale loo yaqaan "dahab madow," waa wax aad u wanaagsan in lagu isticmaalo beero, gadaal, iyo xitaa dhirta gurigaaga. Waxay bixisaa nafaqooyin dheeri ah oo ka dhigi doona dhirtaada kuwo caafimaad qaba kana caawiya inay koraan. Bacriminta ayaa sidoo kale faa'iido leh maxaa yeelay waxay yareyneysaa kharashka qashinka. Waad awoodaa compost guriga, gudaha ama dibedda. Si aad ugu beertid gudaha, waad isku dayi kartaa Vermicomposting. Vermicomposting waxay isticmaashaa dixiriga, dixiriga gooryaanka gorgorka gaduudan, iyo nooleyaasha kale si ay qashinkaaga qashinkaaga iyo qashinka ardaaga ugu beddelaan dahab madow. Dejinta aaladda 'vermicomposting system' waa madadaalo oo fudud!
Si aad dibedda ugu bacrimiso, u diyaarso qashin yar ugu yaraan 3 ft x 3 ft x 3 ft. Adiga ayaa dhisi kara naftaada (waxaa jira fikrado badan iyo qorshooyin khadka tooska ah loogu talagalay qashin-qubka DIY) ama mid soo iibso, sida isku-darka qorraxda. Ku billow inaad ku darto lakab ah “bunniyo,” kuwaas oo ah caleemahaaga la qalajiyey, caws, geedo qoryo ah, iyo waxyaabo kale oo kaarboon ah. Marka xigta, ku dar qaar ka mid ah “cagaarka,” kuwaas oo ah haraagaaga cuntada, goynta cowska, iyo qalabka kale ee nitrogen-ka ah. Saamiga 3 ilaa 1 ee bunni ilaa cagaarka ayaa xaqiijin doona jawiga ugu habboon ee microbes-ka si ay si hufan ugu baabi'iyaan arrinta dabiiciga ah. Hubi in nafaqadu ay qoyan tahay si ay uga caawiso burburka, oo u kici tuubbada mararka qaarkood adoo isku qasaaya ama u jeedsanaya inay bixiyaan oksijiin.
Isku day isku-darka guriga oo fiiri webinarkeena si aad wax badan uga barato!
CET waxay horseed u ahayd xalalka cuntada ee la khasaariyey in ka badan 20 sano. CET naqshadeeyay oo shaqeyneysa Dib u warshadayntaWorks MA, Abaalmarinta abaalmarinta barnaamijka caawinta dhimista cuntada ee Massachusetts. Xalalka Cuntada khasaaray ee CET waxay sidoo kale bixisaa naqshadeynta barnaamijka iyo adeegyo fulineed dhammaan waqooyi-bari Mareykanka iyo wixii ka dambeeya, iyo adeegyada la talinta dhimista qashinka si loo helo macluumaad iyo talo qaran ahaan.